Wararka Maanta: Axad, Feb 9 , 2020-Puntland oo saddex sano oo xabsi ah ku riday masuul lagu helay musuq maasuq
Maxamed Cali Muuse oo ahaa madaxii maaraynta kalluumaysiga ayaa xukunkiisa looga dhawaaqay maxkamada darajada koowaad ee magaalada Bosaso kadib markii uu muddo u xirnaa baarista eedeymaha loo haystay.
Maxkamada waxay xoriyadiisa usoo celisay Mahad Cali Car-Car oo ahaa isu-duwihii wasaaradda kalluumaysiga ee gobalka Garadafuu, kaasoo eeda la wadaagay masuulka xukunka lagu riday ee dambiga lagu helay.
Xukumanaha ayaa haysta racfaan 30 cishe ah.
Madaxweynihii hore ee Puntand, Cabiweli Gaas ayaa sidaan oo kale masuuliyiin katirsan wasaaradda kalluumaysiga u xiray kuwana shaqada uga eryay kadib markii musuq maasuq lagu helay.
Sanadkaan gudihiisana, wasaaradda maaliyadda Puntland ayaa shaqaale katirsan wasaaraddeed u xirtay arrimo musuq maasuq.